GỤỌ NKE Albanian Amharic Arabic Armenian (West) Bulgarian Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Finnish French Georgian German Hiligaynon Hungarian Igbo Indonesian Isoko Italian Japanese Korean Lithuanian Malagasy Mizo Myanmar Norwegian Persian Polish Portuguese Punjabi Rarotongan Romanian Russian Samoan Sepedi Sesotho (Lesotho) Setswana Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tsonga Turkish Ukrainian Vietnamese
2 IHE E MERE 6:29, 30
ÒNYE n’ime anyị ka nsogbu ndị a na-enwe ná ndụ na-akpabeghị aka ọjọọ? Mgbe ụfọdụ, o nwere ike ịdị anyị ka ọ̀ bụ na ọ dịghị onye nwere ike ịghọta nnọọ nsogbu ndị anyị na ha na-alụ ma ọ bụ oké mwute anyị na-enwe. Ma, ọ dị onye na-aghọta nke ọma otú obi dị anyị. Ọ bụ Jehova Chineke. Okwu Sọlọmọn nke dị na 2 Ihe E Mere 6:29, 30, nwere ike ịkasi anyị obi.
Sọlọmọn nọ na-ekpe ekpere n’oge a na-arara ụlọ nsọ dị na Jeruselem nye Chineke n’afọ 1026 T.O.A. (Tupu Oge Anyị). N’ekpere ahụ, nke were ihe dị ka nkeji iri, Sọlọmọn jara Jehova mma ma kwuo na ọ bụ Chineke nke na-eguzosi ike n’ihe, Onye na-emezu nkwa ya, na Onye na-anụ ekpere.—1 Ndị Eze 8:23-53; 2 Ihe E Mere 6:14-42.
Sọlọmọn rịọrọ Chineke ka ọ nụrụ arịrịọ nke ndị na-efe ya. (Amaokwu 29) Ọ bụ ezie na Sọlọmọn kpọtụrụ ọtụtụ nsogbu aha (amaokwu 28), o kwuru na onye nke ọ bụla na-efe Chineke maara “ihe na-egbu ya mgbu,” nweekwa “ihe na-afụ ya ụfụ.” Otu onye nwere ike inwe otu ihe na-enye ya nsogbu n’obi, onye ọzọ enwee ihe ọzọ na-ewute ya.
Nke ọ bụla ọ bụ, ndị na-atụ egwu Chineke nwere onye ga-enyere ha aka ná nsogbu ha. N’ekpere ahụ, ihe Sọlọmọn bu n’obi bụ onye ọ bụla na-efe Chineke nke obi ya kpaliri ‘ịgbasapụ ọbụ aka ya,’ jiri obi ya dum kpegara Jehova ekpere. * Ikekwe, Sọlọmọn chetara na mgbe nna ya, Devid, nọ n’oké nsogbu, o kwuru, sị: “Tụkwasị Jehova ibu arọ gị.”—Abụ Ọma 55:4, 22.
Olee ihe Jehova ga-eme mgbe mmadụ ji ezi obi rịọ ya ka o nyere ya aka? Sọlọmọn rịọrọ Jehova, sị: “Gị onwe gị nọrọ n’eluigwe, bụ́ ebe obibi gị, nụrụ, gbagharakwa wee kwụọ onye ọ bụla ụgwọ dị ka ụzọ ya niile si dị.” (Amaokwu 30) Sọlọmọn maara na “Onye na-anụ ekpere” na-eche banyere ìgwè ndị na-efe ya, na-echekwa banyere ha n’otu n’otu. (Abụ Ọma 65:2) Jehova na-eme ka ha nweta enyemaka ha chọrọ, tinyere ịgbaghara onye mmehie nke ji obi ya niile lọghachikwute Chineke mmehie ya.—2 Ihe E Mere 6:36-39.
Olee ihe mere Sọlọmọn ji jide n’aka na Jehova ga-aza ekpere nke onye na-efe ya chegharịrị echegharị? Sọlọmọn gara n’ihu n’ekpere ya, sị: “N’ihi na ị [Jehova] maara obi ya (n’ihi na ọ bụ naanị gị maara obi ụmụ mmadụ nke ọma).” Jehova maara ihe na-egbu onye na-efe ya kwesịrị ntụkwasị obi mgbu n’obi ma ọ bụ ihe na-afụ ya ụfụ n’obi, nsogbu ya na-emetụkwa Ya n’obi.—Abụ Ọma 37:4.
Ekpere Sọlọmọn nwere ike ịkasi anyị obi. O nwere ike ụmụ mmadụ ibe anyị agaghị aghọtacha otú obi dị anyị—‘ihe na-egbu anyị mgbu’ na ‘ihe na-afụ anyị ụfụ.’ (Ilu 14:10) Ma, Jehova maara obi anyị, ọ na-echekwa nnọọ banyere anyị. Ịgwa ya otú obi dị anyị n’ekpere nwere ike ime ka ibu anyị kara anyị mfe. Baịbụl kwuru, sị: “Na-atụkwasịnụ ya nchegbu unu niile, n’ihi na ihe banyere unu na-emetụ ya n’obi.”—1 Pita 5:7.
^ par. 7 N’oge Baịbụl, mmadụ ‘ịgbasapụ ọbụ aka’ ya, ịchịli ọbụ aka elu, gosiri na onye ahụ na-ekpe ekpere.—2 Ihe E Mere 6:13.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Ọ “Maara Obi Ụmụ Mmadụ”